Wasiir hore oo noqday Beer-fale "Caqabad-baase haysata"
Wasiir hore oo noqday Beer-fale “Caqabad-baase haysata”
Wasiirradii Xukuumaddii Siilaanyo oo saddex u qaybsamay iyo xubin ka soo muuqday meel aan laga filayn…Daawo
Wasiirkii hore W. Ganacsiga iyo Maal-gashiga oo Beeralay noqday..xuquuqda sawirka HCTV
Berbera(GNA)-Wasiirkii hore ee Wasaarada Ganacsiga iyo Maal-gashiga Somaliland Cumar Shucayb, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qodista iyo beerista Beertiisa oo ku taalla duleedka Magaalada Berbera, halkaasoo uu ka samaystay Beer Khudaarta lagu Beerro.
Cumar Shacayb oo Telefishanka Horn cable ka soo muuqday isagoo haramaynaya Beerta, ayaa sheegay inuu dhiiri-gelinayo wax soo-saarka dhanka Beeraha iyo tacabka, doonayana inuu wax kala soo baxo Beertaasi oo sida uu sheegay wax badan uga soo baxaan Bishii. “waxaan Beernay Basashii, Tamaadhadii iyo Cambihii oo dhamaantood aanu halkan ka rarnaa” ayuu yidhi isagoo u muuqday inuu si fiican ugu qanacsan yahay tacabka uu sameeyey.
inta badan Golihii Wasiirrada ee Xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo oo uu ka tirsana ayaa u dhoofay dibada, kuwo kalena waxay gaaf-wareegayaan Majlisyada siyaasada, iyagoo quud-daraynaya inay ku soo laabtaan xayndaabka Maamulka, halka qaar kalena ay Xisbiyada Mucaaridka ka raadinayaan fursado ay saaxada kaga qayb-qaataan.
Laakiinse Cumar Shucayb wuxuu sheegay inuu fursad u helay nasasho iyo inuu naftiisa barro qayb kale oo kamid ah nololsha. “Caqabada ugu weyn ee i hortaalaa waa aqoon-darro oo anigu aqoon uma lihi sida wax loo beerro. markaa waxaan ku talin lahaa inay Dawladdu xoogga saarto sidii dadka Beeralaydaa aqoontooda loo kobcin lahaa” ayuu ku daray hadalkiisa.
Isbedelka ku dhacay Cimilada oo sabab u noqday Abaaro soo noqnoqday sanadihii la soo dhaafay ayaa wax badan ka bedelay qaab-nololeedkii Bulshada Somaliland, waxaanay dad badani ka niyad-jabeen dhaqashada Xoolaha, taasoo ay baydheen dhanka Beeraha.
Hase ahaatee Beeralayda Deegaamada Gobolka Saaxil waxa iyaga laftooda saameysay Abaartii sanadkii hore Gobolka ku habsatay, taasoo meelaha qaarkood sababtay biyo-yaraan iyo dalaga oo qalallay, kaddib markii Cimiladu isbedeshay.
Previous: Sheeko Xigmadaysan: Ma ila socotaa? Q.2-aad
Next: Sheeko Xigmadaysan: Ma ila socotaa? Q3aad